Yakatwasuka Bar Baluster, Yakarongedzwa Iron Balusters, Metal Balusters - Primewerks
Isu tinokudzwa kuva nemukana uyu wekugovana newe zvishoma nhoroondo yedu, Primewerks (Xiamen) Indasitiri neTrade Co, Ltd.i bhizinesi rezvekunze-rese, rinotsigira KHAL International (S) Pte Ltd, a Kambani yeSingapore yakavambwa muna 2005. Kubva panguva iyoyo, tanga tiri mugadziri wezvakarukwa Iron stair zvikamu.
Kunyangwe iwe ungasazive chaizvo kuti chii balustrade / chokurukisa chiri, iwe pamwe unosangana neimwe kakawanda kupfuura zvaungatarisira. Yakawanikwa yakamhara yakawanda masitepisi uye masitepisi, balustrade / spindle mutsara wemakoramu madiki akakwidzwa nechitima. Izwi iri rinotorwa kubva ku ...
Nzira yekugadzirisa sei masitepisi ako?
1 / Nyatsoita njanji njanji Kazhinji nzira yedu yekutuka inogona kuve chinhu chimwe chete chakamira pakati pako neakakwenenzverwa, anoesthetic. Chinyakare Balusters (kana chokurukisa) uye handrails hazvikurudzire - zvinongoshanda. Matinji edu anogona kushanda pamwe nekuwedzera ...
Sei uye Izvo Zvatingaite Kana Kana Kudonha Pasi Masitepisi Akakomba?
Chaizvoizvo kudonha ndezvimwe zvezvikonzero zvinowanzoitika zvekukuvara zuva nezuva muUS uye zvikonzero zvakajairika zvekukuvara kwehuropi. Zvinoenderana neongororo yekutsvagisa ya2016, chero kupi kubva pa7 ~ 26% kudonha kunoitika pamatanho. Nepo mamwe masitepisi anodonha zvichikonzera kukuvara kwemusoro kuri pachena kana hudyu fr ...
UNOGONA KUTITIRA PANO